Black Friday: Nke kacha mma na multimedia, Ngwa na wearables | Akụkọ Ngwa
El Black Friday Ọ dị nso n'akụkụ, dịka ị maara nke ọma, a na-eme ememe Fraịde na-esote, Nọvemba 26, Otú ọ dị, ọtụtụ n'ime ihe ndị a na-enye adịlarị na isi ihe ị na-ere n'ịntanetị na ebumnuche nke ịkwado ịzụ ahịa ekeresimesi nye ndị ọrụ niile.
Anyị na-ewetara gị azụmahịa kacha mma na ngwa, wearables na ngwaahịa mgbasa ozi ka ị nwee ike irite uru na Black Friday a. Chọpụta na anyị otu ị ga-esi chekwaa kacha, yana otu ị ga-esi nweta uru ikekwe ịzụrụ ekeresimesi buru ibu na-enweghị mkpa kaadị kredit gị ga-agwụ.
1 Nyochaa AOC Gaming U28G2AE / BK
2 Huawei MateView - dị mma maka ọrụ
3 Huawei Watch 3, elekere okirikiri
4 Amazon Fire HD 10 - Ọ dị mma, mara mma na ọnụ ala
5 Anker PowerConf C300 iji kwalite oku vidiyo gị
6 Ngwa egwuregwu HyperX na ọnụ ahịa mbelata
7 CS3040 M.2 SSD maka PS5 na PC
Anyị nwere na nke a nyochaa IPS LCD panel nke nwere mkpuchi mgbochi na-egbuke egbuke na akụkụ 16: 9 na-ejikọta ya na WLED backlighting nke na-enye anyị ohere iji ohere zuru oke nke ntọala dị nso na HDR zuru ezu. Maka akụkụ ya, anyị nwere nchapụta kacha nke nits 300 nke ahụ na-eme ka anyị na-esetịpụ ihe doro anya. Na mgbakwunye na 60Hz, kedu ka ọ ga-esi bụrụ ma ọ bụghị, anyị nwere 85% nke ọkọlọtọ NTSC na 119% nke ọkọlọtọ sRGB ya mere ọ dịkwa mma maka idezi ya.
N'ihe gbasara njikọta, anyị nwere ọdụ ụgbọ mmiri HDMI 2.0 abụọ na ọdụ ụgbọ mmiri DisplayPort 1.2 yana mmepụta ekwe ntị ngwakọ 3,5-millimita. Na mgbakwunye, ọ na-esonyere ya na sistemụ ụda stereo 3W zuru oke kwa ụbọchị. Ị nwere ike zụta ya na mbelata 10% na Amazon site na euro 323,90, na ọnụahịa kacha mma yana nnyefe n'ime otu ụbọchị. Ihe na-adọrọ mmasị maka Black Friday nke ga-enye gị ohere ịnụ ụtọ nleba anya a nke na-agbachitere onwe ya ma na gburugburu ọrụ ma na egwuregwu.
Huawei MateView - dị mma maka ọrụ
Huawei MateView bụ ihe nleba anya nke n'ihi usoro ya, imewe ya na njirimara ya na-enye gị ohere imeziwanye nrụpụta gị n'ụzọ kachasị "adịchaghị". Danyị nwere 28,2 inch na 4K + mkpebi (3.840 x 2.560) nke na -ejikọ teknụzụ HDR400, maka nke a ọ na -eji a Ndụmọdụ 500 nchapụta, n'elu ọkọlọtọ ahịa maka ụdị panel a. Anyị nwere ọnụego ume ọhụrụ "naanị" 60 Hz nke na -echetara anyị na anyị na -eche ihu ileba anya lekwasịrị anya na imepụta ihe, yana oke nke 1.200: 1 iche.
Ị nwere ike iji ya mee ya na nnukwu mbelata 15% na Amazon, yana ozugbo na Ụlọ Ahịa Huawei.
N'akụkụ aka nri anyị ga -ahụ obere isi «HUB» nke ga -enye anyị ọdụ ụgbọ mmiri USB-A abụọ ọgbara ọhụrụ, ọdụ ụgbọ mmiri DisplayPort USB-C dakọtara na chaja ruo 65W na a jakị ọdịyo ngwakọ (na -enye ohere ntinye na mmepụta) nke 3,5mm. Agbanyeghị, ọ bụghị ihe niile fọdụrụ ebe a, azụ bụ maka ọdụ ụgbọ USB-C nke na-enye ike ngwaọrụ ahụ ihe ruru 135W, yana kpochapụwo Mini DisplayPort na ọdụ ụgbọ mmiri HDMI 2.0.
Huawei Watch 3, elekere okirikiri
Nke mbụ nke wearables bụ Huawei's Watch 3 bụ smartwatch Huawei na-agba ọsọ na nke mbụ n'okpuru Mmetụta 2.0 Sistemụ arụmọrụ nke ika ahụ nwere ike imebi weOSOS nke Google n'ihi nnukwu arụmọrụ ya.
Ọ nwere isi ihe mmetụta dị ka oxygen sensọ, pulsation, okpomọkụ na ọbụna altimeter n'etiti ndị ọzọ, nke na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ndị kasị zuru ezu, ugbu a maka naanị € 279 nke bụ mbelata nke 90 euro.
Ọzọ na-akpali na ọnụ ala ọzọ bụ Huawei Band 6, Anyị enweghị ike ịtụ anya ọrụ ndị ọzọ sitere na ya, anyị nwere mgbaaka quantifying nke na-akụ ndị na-agba ya ọsọ na imepụta yana na ihuenyo na ọnụahịa nke 34,90 euro naN'eziokwu, ọ na-eme ka m kwụsị asọmpi niile kpamkpam.
Amazon Fire HD 10 - Ọ dị mma, mara mma na ọnụ ala
Anyị na-ahụ mbadamba nkume 10,1-inch, ngwaike ejidere yana ọnụ ahịa ya na onyinye na-adọrọ mmasị bụ nke a na-achọkarị na-eri ọdịnaya, ma ọ bụ site na nyiwe nke Amazon n'onwe ya na-enye ma ọ bụ site na ndị na-eweta mpụga.
Anyị nwere ihe nrụnye isi asatọ nwere nke ọma na 2,0 GHz na 3GB nke RAM, yana 32 ma ọ bụ 64 GB nchekwa dabere na ụdị ahọpụtara. Ngwa maka naanị 144,99 euro na onyinye Black Friday a Ọ na-enye anyị njirimara passable na dị ka ọnụ ahịa.
Anker PowerConf C300 iji kwalite oku vidiyo gị
Obi abụọ adịghị ya na a na-ewere ya dị ka ngwa ọrụ doro anya maka nzukọ ọrụ anyị na-ekele maka ogo nke igwe okwu ya na ntụgharị dị iche iche ọ na-enye anyị, ọ bụrụ na ị kpebie ịkụ nzọ na Anker PowerConf C300 n'enweghị obi abụọ ọ bụla na ị gaghị emehie, ruo ugbu a, nke kachasị mma anyi anwaala. Nweta ya site na euro 79 yana mbelata 38% na Amazon.
Anyị ga-enwe ike ịhazigharị akụkụ nlele atọ nke 78º, 90º na 115º, nakwa dị ka na-ahọpụta n'etiti atọ kpọọ àgwà n'etiti 360P na 1080P, aga site na omume nke ukpụhọde fps, rụọ ọrụ ma deactivating na-elekwasị anya, na HDR na a Ọrụ mgbochi Flicker na-adọrọ mmasị nke ukwuu, site na eriri USB-C ya niile.
Ngwa egwuregwu HyperX na ọnụ ahịa mbelata
Anyị ji mkpịsị ugodi Hyper X Alloy Core malite na igodo 105 yana ibu dị elu n'ihi nrụ ígwè ya. Nwee USB 2.0 na a polling ọsọ nke 1.000 Hz O doro anya na ọ nwere multi-key mgbochi ghosting usoro na n'aka nke ya nwere igodo raara onwe ya nye maka multimedia njikwa, yana "ụdị egwuregwu".
Maka Pulsefire Core anyị nwere ihe mmetụta Pixart PAW3327 ya na mkpebi nke 6.200 dpi na usoro ihe atọrọ atọ nwere bọtịnụ dị n'elu nke 800/1600/2400 na 3200 dpi dabere na ụtọ onye ọrụ ọ bụla.. Ọsọ bụ 220 IPS na ngwangwa kacha bụ 30G. Ka anyị gbaa ngụkọta nke bọtịnụ 7, nke na -ekwe nkwa ogologo ndụ nke nde 20.
CS3040 M.2 SSD maka PS5 na PC
Este XLR8 CS3040 bụ M.2 NVMe SSD Ọgbọ nke anọ nwere heatsink jikọtara ọnụ nke ọma. E nyere n'ime ụdị nchekwa atọ: 500GB, 1TB, na 2TB. N'ọnọdụ anyị, anyị na -enyocha ụdị 1 TB na anyị ga -ekwu na ọ nyela anyị ezigbo nsonaazụ.
Ihe ndị a niile na -enye anyị akwụkwọ ruo 5.600 MB / s n'ihe gbasara arụmọrụ ọgụgụ, yana ihe ruru 4.300 MB / s n'ihe gbasara arụmọrụ ide ihe. N'ime ule anyị, dị ka ị na -ahụ na vidiyo na -eduga nyocha a, anyị gafere ọsọ ọsọ ọgụgụ agụpụtara, a na -ezutekwa ide ihe.
Ọnụahịa ahụ bụ na mbelata 36% na Amazon maka ụdị 500 GB ma na-adịgide naanị na euro 96, onyinye agaghị ekwe omume ịjụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Black Friday: Nke kachasị mma na mgbasa ozi, ngwa na wearables
Black Friday: onyinye kacha mma na akpaaka na ụda ụlọ